8. Gịnị ka ụfọdụ kwuru banyere obi ụtọ ha na-enwe maka na ha na Jehova na-arụkọ ọrụ? 8 Ọ bụrụ na anyị enyere ndị ọzọ aka ịmụta banyere Chineke, anyị ma na anyị na-eme ihe dị́ Jehova mma nakwa na o ji mbọ anyị na-agba n’ozi ya kpọrọ ihe. Ọ na-emekwa anyị obi ụtọ. (Gụọ 1 Ndị Kọrịnt 15:58.) Otu nwanna bí n’Ịtali aha ya bụ Marco sịrị: “M na-enwe obi ụtọ na-enweghị atụ n’ihi na m ma na ọ bụ Jehova ka m ji ike m niile na-ejere ozi, ọ bụghị onye ga-echefu ihe m mere n’oge na-adịghị anya.” Nwanna ọzọ bí n’Ịtali aha ya bụ Franco kwukwara, sị: “Jehova ji Okwu ya bụ́ Baịbụl na ihe ndị ọzọ o nyere anyị na-echetara anyị kwa ụbọchị na ọ hụrụ anyị n’anya nakwa na ihe niile anyị na-arụrụ ya dị mkpa ọ bụrụgodị na anyị chere na mbọ anyị na-agba enweghị ihe ọ bụ. Ọ bụ ya mere mụ na Chineke ịrụkọ ọrụ ji eme m obi ụtọ, na-emekwa ka ndụ m nwee isi.”
mailto:?body=Anyị na Chineke Ịrụkọ Ọrụ Na-eme Anyị Obi Ụtọ%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D402016047%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Anyị na Chineke Ịrụkọ Ọrụ Na-eme Anyị Obi Ụtọ